ပြည်တွင်းကို အဝေးကနေလှမ်းမျှော်ကြည့်နေရတယ်။ ပြည်ပနိုင်ငံရေးမှာ ဆီခမ်းသွားတာ ၂ဝဝ၈ ဖွဲ့စည်းပုံကြီးကြောင့်ပါ။ မီးစာတော့ မကုန်သေးပါ။
အဲဒီအပြောင်းအလဲမှာ အပြင်နေသူတွေက ပရိသတ်ဖြစ်သွားရတယ်။ တချိန်တုံးကတော့ ပြည်တွင်း-ပြည်ပ ဆက်သွယ်ရေးရယ်လို့ လှိုင်းတိုရေဒီသာရှိခဲ့တယ်။ နဂိုကတည်းကရှိပြီးသာ ဘီဘီစီ၊ ဗွီအိုအေနောက်မှာ အာရ်အက်ဖ်အေနဲ့ ဒီဗွီဘီ ပေါ်လာတယ်။ ဒီဗွီဘီကပိုစောတယ်။ ဒီဗွီဘီစလွှင့်တဲ့ရက်က အာဇာနည်နေ့မှာပါ။ ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ နယူးဒေလီမြို့ ဗီကပ်စ်ပူရီအရပ်ထဲမှာ အိမ်တထပ်ကိုငှားနေခဲ့ကြတုံးက ဝိုင်းစုပြီးနားထောင်ခဲ့ကြတာကို အမှတ်ရတယ်။
အိန္ဒိယဖက်အတွက် စတူဒီယိုဖွင့်ပွဲမှာ စကားပြောရတယ်။ ချင်းတွင်းစတူဒီယိုလို့ အမည်မှည့်တယ်။ ပြည်ပကအသံတွေ ပြည်တွင်းကို ရောက်စေခဲ့ကြတယ်။ ကျွန်တော့်အသံလည်း ပါလေ့ရှိတယ်။ နောက်တော့ ဒီဗွီဘီက တီဗွီအစီအစဉ်ပါ ဖြစ်လာတယ်။ ရုပ်ကိုပါဖန်သားပြင်မှာ ကျွန်တော်အော်အော်ပြောနေတဲ့ပုံတွေ ကြည့်ရတယ်လို့ မိတ်ဆွေတွေက လှမ်းပြောကြတယ်။ ကျွန်တော်သေပြီလို့ သတင်းထွက်ထားတာမို့ ပြန်မြင်ရလို့ အမျိုးတွေကဝမ်းသာကြသတဲ့။
ပြည်ပမှာ အသင်းအပင်းတွေဖွဲ့ကြတယ်။ ကြာတော့ မှိုလိုပေါက်တယ်လို့ တင်စားခံရတယ်။ စာအုပ်တွေထုတ်ကြတယ်။ စာအုပ်ထုတ်တော်လှန်ရေးလို့ ကင်ပွန်းတပ်ခံရတယ်။ ဆရာတင်မိုးလာတုံးက သူ့အကဲဖြတ်ချက်ကိုမေးတော့ ဆရာက ကောင်းပါ့ စာရွက်စာသားတွေ၊ ကောင်းပါ့ မင်ကျမင်နတွေတဲ့။
အစည်းအဝေးတွေ လုပ်ကြတယ်။ လူ ၂ ယောက်လောက်သာနေနိုင်တဲ့ အခန်းကျဉ်းလေးထဲ ၁ဝ-၁၅ ယောက်ထိုင်ပြီး စည်းဝေးတာလည်းရှိတယ်။ ဖိုက်စတားဟော်တယ်မှာလည်း လုပ်တဲ့အခါလုပ်ကြတယ်။ မိုးရွာထဲထီးဆောင်းသွားရတာရှိသလို ဘိုးရင်းလေယာဉ်ပျံကြီးစီးသွားရတာလည်းရှိတယ်။ လမ်းတွေပေါ်မှာ လမ်းလျှောက်ပြီး ဆန္ဒပြကြရတာတော့ တကယ့်ကို မရေမတွက်နိုင်ပါ။
အင်ဂျီအိုတွေ တဖွဲ့ပြီးတဖွဲ့လာကြတယ်။ သင်တန်းတွေ တမျိုးပြီးတမျိုးပေးကြတယ်။ အစုံပါပဲ။ သင်တန်းဆင်းတွေက ဆရာကြီးတွေ ဆရာမကြီးတွေဖြစ်လာကြတယ်။ မီဒီယာလူတန်းစာပေါ်လာတယ်။ အင်ဂျီအိုကိုယ်ပိုင်တွေဖြစ်လာတယ်။ ဗိုလ်ပြောတတ်သူတွေ များလာတယ်။
ကနေ့ ပြည်တွင်းမှာ အဲတာတွေအကုန် မိတ္တူကူးသလိုဖြစ်လာနေတာတွေ့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်က ရေဒီယိုကိုနားစွင့်ပြီး တီဗွီကို ငေးကြည့်နေရတယ်။ သူတို့ ရှင်သန်နေကြပါလား။
၁။ သမိုင်းဆိုတာ ဘီးတပတ်ပြန်လည်တယ်။ ပဌမတော့ ကံဆိုးမိုးမှောင်ကျခြင်း။ ဒုတိယက ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက်ဖြစ်ခြင်း။ (ကားလ်မတ်စ်၊ ဂျာမန်လူမျိုး ဖီလော်ဆော်ဖါ၊ ကွန်မြူနစ် မင်နီဖက်စတိုနဲ့ အရင်းကျမ်းကို ရေးသားစီရင်ခဲ့သူ)
၂။ သမိုင်းဆိုတာ ဘီးတပတ်ပြန်လည်တယ်။ သေဆုံးသွားတဲ့အနုပညာကိုတော့ တဖန်ပြန်မွေးမပေးပါ။ အဲတာဟာ ကမ္ဘာပေါ်ကနေ အပြီးအပိုင်ပျောက်ကွယ်သွားတော့တာဖြစ်တယ်။ ဖျက်ဆီးတာခံလိုက်ရတဲ့ တောငှက်လေးတကောင် တေးဆိုသလိုပဲ။ (ဂျိုးဆက် ကောနတ်၊ ပိုလန်-ဗြိတိသျှ စာရေးဆရာ)
As usual news မထူးတဲ့သတင်း
2016 ၂ဝ၁၆ မှာပေါ်လာပါစေ
The Most Dangerous Times on the Road
ASCUS Pap abnormality သားအိမ်ဝစစ်ချက် ပုံမှန်မထွက်
Medical vocabulary ဆေးစာ ဝေါဟာရများ (အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ)
Medical vocabulary ဆေးစာ ဝေါဟာရများ
A doctor’s wish ဘေးမသမ်းဘဲ အေးချမ်းကြစေသော်ဝ်
Cartilage growing to rebuild body parts
Contraception Natural Method သဘာဝနည်းနဲ့ ကိုယ်ဝန်တ...
Birth control methods for you တားနည်း-တားဆေး ဘယ်လိ...
New Year Healthy Life Choices နှစ်သစ်အတွက် အကြံပြု...
My yearning နှစ်သစ်ဆုတောင်း
500,000 years from now နိမိတ်ဖတ်ခြင်း
Self-styled medicines ကြော်ငြာဆေး ဘေးဖြစ်နိုင်တယ်
Roadside medicines အရပ်ဆေးနဲ့ လမ်းဘေးဆေး
The Bestseller Books အဖတ်များခဲ့တဲ့ ဘာသာပြန်စာအုပ်...
Family History of Cancer ကင်ဆာမိသားစုရာဇဝင်
Last gasp နောက်ဆုံးမီးတောက်
Reply accordingly ရီပလိုင်းလုပ်ရခြင်း
DNA testing မျိုးဗီဇစစ်ဆေးခြင်း
Tortoise Quotes လိပ်လား ယုန်လား
Thai-Myanmar deep relations ထိုင်း-မြန်မာ ပင်လယ်နက...
My Shan friends ရှမ်းမိတ်ဆွေတွေ
Stroke Emergency Treatment ဆထုပ် အရေးပေါ်ကုသခြင်း
The Independence Month နတ်တော်နဲ့ ပြာသို
Drinking Carcinoma ကင်ဆာကို ရေမရောပဲသောက်ခြင်း
Burmese History Chronology by Dr. Than Tun
Seeds for planting အစေ့ချခဲ့ကြခြင်း
Post of2years ago about the event of 11 years ago
Burma–Thailand relations မြန်မာ-ထိုင်းဆက်ဆံရေးသမိုင်း
Burmese–Siamese wars သမိုင်းထဲက မြန်မာ-ထိုင်းစစ်ပွ...
Oshkosh L-ATV အမေရိကန်စစ်သုံးယာဉ်အသစ်
Justice တရားသူကြီးနဲ့ တရားကြီးသူ
Hirschsprung Disease မွေးရာပါအူပိတ်ရောဂါတမျိုး
The different groups မတူတဲ့အုပ်စုများ
Forced to change အပြင်ခံရခြင်း
Levothyroxine and Breastfeeding လည်ပင်းကြီးဆေးနဲ့ ...
Digestive enzyme အစာကြေဆေး
Good Produce အထွက်ကောင်းပါစေ
Ferritin test ဖါရတင်ဓါတ် များနေခြင်း
Age unknown အသက်ပြောရမှာကြောက်တဲ့ရောဂါများ (အဆက်)
Hundred times အကြိမ်တရာ
Diseases and Blood donation ဒီရောဂါရှိသူတွေ သွေးမလ...
Doctor-Patient Communication ဆရာ-လူနာ ဆက်သွယ်ရေး
Doctor patient relation ဆရာ-လူနာ ဆက်ဆံရေး ဆရာမ-လူန...
Estrogen voice အသံကြား ခြားခြားနားနားသိပါစေ
Undisclosed အသက်-ကျား-မ မပြောလိုကြသူများ
From Fort Wayne to Indianapolis
Jatavana monastery, Fort Wayne
Propaganda songs အပုပ်ချသီချင်းများ
IMOJEV ဂျပန်ဦးနှောက်ရောင်ရောဂါ ကာကွယ်ဆေး
Japanese encephalitis ဂျပန်-ဦးနှောက်ရောင် ရောဂါ
Banana Diets ငှက်ပျောသီး-အာဟာရ
Banana Bags ငှက်ပျောသီးအိတ်
Unwelcome claims on beer ဘီယာဟာ သောက်သင့်တယ်ဆိုတဲ့...
Deformed Nipples နို့သီးရောဂါများ
How breasts make milk မိခင်နို့ ဘယ်လိုဖြစ်လာသလည်း
Wrinkles မျက်နှာအရေးအကြောင်းတွေ သက်သာချင်ရင်
Surgical sutures ခွဲစိတ်ချုပ်ကြိုးများ
Pony tail မေ့မရတဲ့ လက်ဆောင်
Alcohol taxes and public health အရက်ခွန်နဲ့ လူထုကျ...
Ovarian cancer Screening မျိုးဥအိမ်ကင်ဆာစစ်နည်း
Betel nut with Tobacco ဆေး-ကွမ်းယာ နဲ့ ကျန်းမာရေး
Dry Skin on Penile Shaft ယောက်ျားလိင်အင်္ဂါ အရေပြားေ...
Misery of U Win Ko’s death
Garden bird feeder ငှက်စာ
People Who Don’t Drink Alcohol Might Be More Likel...